SWOT Analysis ဆိုတာ ……..? – BYAMASO Articles
SWOT Analysis ဆိုတာ ……..?
S = Strength ( အားသာချက် )
W = Weakness ( အားနည်းချက် )
O = Opportunity ( အခွင့်အလမ်း )
T = Threat ( ခြိမ်းခြောက်မှု )
မည်သည့်စီးပွာရေးမဆို SWOT Analysis ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ အခြေအနေကိုလေ့လာဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါပုံအတိုင်း အကွက်လေးကွက်ဆွဲပါ။ ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးမိမိလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်း၏ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက် ၊ အခွင့်အလမ်း ၊ ခြိမ်းခြောက်မှု တို့ ကိုရေးသားပါ။
ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ခွင့်မရှိ့ ခြင်း
Strenght ( အားသာချက် ), Weakness ( အားနည်းချက် ) တို့ ဟာလုပ်ငန်းအတွင်းမှာဘဲရှိတဲ့အတွက်ထိန်းချုပ်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း၏ အားသာချက်ကို အမိအရကိုင်ထားပြီး အားနည်ချက်ကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
Opportunity ( အခွင့်အလမ်း ), Threat ( ခြိမ်းခြောက်မှု ) တို့ ဟာ လုပ်ငန်း အပြင်ဘက်ကဖြစ်လို့ ထိန်းချုပ်ပြုပြင်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ လုပ်ငန်း ဟာ အခွင့်အလမ်းကိုအမိအရဆုပ်ကိုင်ပြီး ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် စမ်းစစ်နိုင်ပါတယ်။